Al-Shabaab oo weerartay Saldhig ay Ciidamada TFG-da ku leeyihiin Geedweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo weerartay Saldhig ay Ciidamada TFG-da ku leeyihiin Geedweyne
Kismaayo (Keydmedia) - Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Shabaab/Al-Qaacida ayaa Manta weerar xooggan ku qaday fariisin Ciidamada TFG-da ay ku leeyihiin deegaanka Geedweyne oo u dhaxeeya degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobbolka Gedo, ayadoona weerarkaasi uu ka dhashay Khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Horjoogayaal katirsan xarakada Al shabaab ayaa ka sheegay Idaacadda ku hadasha Afka Kooxda awoodeeda ay sii laciifeyso ee Shabaab in dagaalka ay ku qaadeen deegaanka Geedweyne uu ahaa mid gaadmo ah oo ay khasaare ballaaran ku gaarsiiyeen Ciidamada Dawladda KMG ah, sida ay sheegteen.
Horjoogayaashan ayaa intaas ku daray in wakhti kooban ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Geedweyne ee uu dagalka ka dhacay, iyagoona sidoo kale sheegay inay gubeen dhowr baabuurta dagaalka ah.
Dhanka kale Diyaad Cabdi Kaliil oo kamid ah Sarakiisha TFG-da oo la hadlay xafiiska Keydmedia ee Kismaayo ayaa beeniyay in wax Dagaal ah uu ka dhacay deegaanka Geedweyne, iskaba daa buu yiri inay la wareegeen.
Wuxuu sheegay in hadda deegaanka Geedweyne ay ka arrimiyan Ciidamada TFG-da oo uu san wax shidda ah ka jirin.